» Amin Arts oo sheegay in uu aad ugu xumaado Dhibaatada Soomalida South Africa “Daawo Warasysiga Amin Arts oo dhinacyo badan taabanaya.? Thursday, April 24th, 2014
Amin Arts oo sheegay in uu aad ugu xumaado Dhibaatada Soomalida South Africa “Daawo Warasysiga Amin Arts oo dhinacyo badan taabanaya.?
Dec 4, 2012 - jawaab	Aqrisatay:2116Iyadoo qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ay dhahaan kartuunistaha weyn ee caanka ah ee Amin Arts ma ogola in la weydiiyo su’aalo ayaa waxaa arintaasi wax ka duwan ay shacabka Soomaaliyeed ay indhahooda ku arkeen Amin Camir oo marti ku ah barnaamijka arimaha Bulshada oo la weydiinayo daraasiin Su’aalo Ah kaasi oo si wanaagsan u qanciyey martida barnaamijka arimaha bulshada ee ka baxa Tv-ga caalamiga ah ee Universal.
Abdi Hafiid Mohamud Jaamac oo ah madaxa sare ee Barnaamijka arimaha bulshada ayaa weydiiyey in mararka qaar in uu is weydiiyey waxa uu sawirayo hadii ay dhibsanayaan bulsho ama qof gaar ah maxaa dhib ah ee kaa soo gaara? Ayuu amin arts ku jawaabay sidatan. Daawo Iyadoo Maqal iyo Muuqaal ah.
Xafiiska K/Africa Share